I-Tip Loader ye-Pipette I-Tip yokugcwalisa ngokuzenzekelayo iPipette Tip Sorter-ANTITECK
IMBALI -Inkampani yeeNzululwazi ngezoBomi inikezela ngezixhobo zeLebhu, iLebhu enokuSetyenziswa kunye nezixhobo zeNzululwazi
I-Loader ye-Tip yokuLungiswa kwePipette
Ukwenziwa njani imicu yoVavanyo loMchamo
Inkqubo yokugcwalisa incam ngokuzalisa ngokupheleleyo, vumela umatshini enze umsebenzi odinayo!
Yintoni umlayishi wetip?
Kutheni usebenzisa i-tip loader?
Iiparamitha zomlayishi wethiphu
Iimpawu umlayishi kwincam
Kwipayipi Icebo yokubeka Loader VS Tip Loader
Luhlobo luni lwencam yokubetha enokuthi isebenzise umlayishi wethiphu ukuphinda ugcwalise indawo yokubeka incam?
Yeyiphi incam yombhobho wepipette onokusebenzisa umlayishi wethiphu ukuphinda uzalise i-rack rack?
Uyisebenzisa kanjani i-tip loader yokugcwalisa incam yepipette?
Ungayi-odola njani i-tip loader?
Ingcebiso umlayishi ilungiselelwe ngokukodwa Ingcebiso yombhobho. Ikwanike igama njengeNkqubo yokuPhilisa kwakhona yePipette okanye Ipipette Icebo elifutshane. Antiteck Ingcebiso Loader zizaliswe ngokupheleleyo iingcebiso zepipette kwi-rack ngaphandle kongenelelo lwencwadi.
Kwimisebenzi yokuhambisa iilebhu, Ingcebiso yombhobho ngumsebenzi odikayo. Ngokwesiqhelo kufuneka umncedisi omnye okanye ababini baselebhu benze lo msebenzi. Kuya kuthatha iindleko eziphezulu kakhulu ukuhlawula umvuzo kunye nokufumana umsebenzi ongafanelekanga.
Umvuzo ophakathi ongumncedisi yi- $ US20 / ngeyure. Inkqubo yepipette yokugcwalisa incam $ 3 / ibhokisi (ii-96 ii-pcs / i-rack). Isiciko sepipette yesiliphu esiyi- $ 5 / ingxowa (200ul / 1000pcs).
Olu kubalo luqikelelo, iindleko kunye nefuthe lokusingqongileyo zinokwahluka ngokwahlukeneyo.
Incwadana ye-Tip Loader
Ukukhulula abasebenzi, vumela umatshini wenze umsebenzi odikayo!
Dimension: 67 * 51 * 55cm
Ixesha lokugcwalisa: Iibhokisi ezingama-48 / iyure
Umthamo wesixhumi: ngaphezulu kweengcebiso ze-1.000
Cwangcisa ixesha: ngaphantsi kwemizuzu emi-2
Power unikezelo: 220 V 50 - 60 Hz
Ukutya umbane40 W
1. Ukuzalisa ngokukhawuleza, ukuya kwiibhokisi ezingama-48 ngeyure
2. Chukumisa iphaneli yokulawula isikrini
3. Inobuhlobo kwaye kulula ukuyisebenzisa
4. Umsebenzi olula kakhulu
5.Izinto eziphambili ezenziwe ngentsimbi engama-304 (ibanga lezonyango)
6. Bench uyilo phezulu kulula ukuyisebenzisa elebhu
7. Ilungele ezona ntlobo zisetyenziswayo zepipette yazo zonke iimveliso kunye neevolumu ukusuka kwi-0.1 ukuya kwi-10 μl kunye ne-10 - 1250 μl.
Iingcebiso zeBiotix Universal
Iimveliso zeLebhu yeOxford
1. Yondla isixa esikhulu iingcebiso zombhobho kwi feeder
2. Khetha inkqubo
3. Baleka ulinde ukugqiba!
Kwifowuni yakho (efunekayo)
Ii-incubators zokuhlamba ezomileyo
I-Lyobeads Forming System
Yintoni umatshini weCentrifuge?
Ziziphi iintambo zoVavanyo lwe-Urine?
Yintoni Isingxobo soMfanekiso?
Yintoni i-96 yePlayithi eNzululwazi?
Izixhobo zeLebhu yeLebhu ye-Chemistry ebalulekileyo kwiLebhu nganye
IiSayensi zoBomi zeAntiTeck
Ukuhamba kamvaMicropipetteICentrifugeIzixhobo zeLabhanki
Ndwendwela uFacebook wethuNdwendwela uTwitter wethuNdwendwela yethu LinkedInNdwendwela itshaneli yethu yeYouTube
cookiesumthetho wabucalaImmimiselo & nemiqathango
Sisebenzisa ii-cookies ukuze sikunike elona thuba libalaseleyo kwiwebhusayithi yethu. Ngokuqhubeka nokusebenzisa le ndawo, uyavuma ukusebenzisa kwethu ikuki.